Edwin Van Der Hoeven - တရားအားထုတ်ခြင်း၊
ဘာဝနာ & သတိထားမိ
Self Expression & တီထွင်ဖန်တီးမှု
သင်ဤဆိုဒ်တွင်သင်ရှာနေသည့်အရာကိုသင်ရှာဖွေမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ၎င်းသည်သင်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်နည်းနည်းချင်းကွဲပြားခြားနားနိုင်သည်သို့မဟုတ်အလတ်စား (သို့) နည်းပြတစ်ယောက်မှအသုံးပြုသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးအားထားပြုသူ၊ အရာအားလုံးအပြန်အလှန်ဆက်စပ်နေသည်နှင့်ငါဘဝ၏လူတန်းစားပေါင်းစုံကနေလှုံ့ဆော်မှုဆွဲ။
ငါသူတို့ဘဝ၌ပြwithနာတစ်ခုနှင့်အတူလမ်းပြခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းသင်တန်းသားများကိုအတူဤကိုလည်းကြည့်ပါ။ သူတို့က X ကိုလုပ်ဖို့လာကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် Y ကိုတကယ်ဂရုစိုက်သင့်တယ်ဆိုတာသိတယ်။ ထိုအရာ၏လက်ဆောင်သည်သူတို့၏ဘဝကဏ္ aspects အားလုံးတွင်ရလဒ်ကောင်းများရရှိစေသည်။ မှန်ပါသည်၊ အဘယ်အရာကိုမျှတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားကနေသီးခြားစီထို့ကြောင့်အပြည့်အဝရုပ်ပုံအရေးကြီးပါသည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ သည်အပွင့်ပွင့်လန်းလာလိမ့်မည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများပေါင်းလဒ်ထက်ပိုများမှာ! လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အနေနှင့်၊ သင့်မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
Facebook မှာ-,flinkedin တွစ်တာ အလယ်အလတ် Pinterest Youtube ကို
အစီအစဉ် B - ငါတို့၏အနာဂတ် Bitcoin
ပိုကောင်း brainwave Entrainment နှင့်အတူတှေးတောဆငျခွ
Padmasambhava မှ "Vajra Guru" ဂါထာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီခန္ဓာကိုယ်၏7Chakra
အခြေခံပညာ Chakra ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုဘာဝနာ
Sacral Chakra ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုဘာဝနာ
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး plexus ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုဘာဝနာ
နှလုံး Chakra ဘာဝနာပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု
တတိယမျက်စိ Chakra ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုဘာဝနာ
HSP - မြင့်မားသောအထိခိုက်မခံအမြင်
မြင့်မားသောအထိခိုက်မခံပုဂ္ဂိုလ်5ဝိသေသလက္ခဏာများ
သင်ဟာအလွန်အထိခိုက်မခံတဲ့လူလား။ hsp စစ်ဆေးပါ
အလုပ်ခွင်ထဲမှာမြင့်မားသော sensitivity ကို
အလွန်အထိခိုက်မခံန်ထမ်းများ၏5အခွက်
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း - အာရုံခံအမြင်မှတဆင့်သက်သေပြ
အက်ဒဝင်ဗန် der Hoeven CSNU တစ်ဦးအလတ်စား spiritualist
Edwin van der Hoeven - HSP / မြင့်မားသောထိခိုက်လွယ်မှု၊
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များပြောသည့်အတိုင်းလူအားလုံး၌တူညီသောအရာတစ်ခုရှိသည်။ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေခြင်း' ပျော်ရွှင်မှုကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များစွာရှိသည်။ ပိုပြီးငွေ၊ အသွင်အပြင်၊ ချိုသာသောမိတ်ဖက်၊ အောင်မြင်မှု၊ ကျန်းမာရေး၊ လွတ်လပ်ခွင့်၊
အနောက်ကမ္ဘာမှလူအများတို့သည်မိမိတို့၏အပြင်ဘက်ရှိပျော်ရွှင်မှုကိုအာရုံစိုက်ကြသည်။ သို့သော်အတွေ့အကြုံများကဤသည်မှာများသောအားဖြင့်ယာယီစိတ်ကျေနပ်မှုရစေပြီးနောက်တစ်ကြိမ်ကလစ်ကိုသင်လျင်မြန်စွာစတင်ရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ အတွင်းစိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုသင်မွေးမြူသောအခါသင်၌ရှိသည် ဖြစ်တည်မှု၏ပြည်နယ် သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လုံ့လရှိသူ၊ သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအောင်မြင်မှုအတွက်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့အပြင်ပန်းအခြေအနေကိုမင်းဆီကိုငါလုံးဝအပ်နှံလိုက်ပြီ။ အတွင်းစိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုမွေးမြူခြင်း၊ စိတ်နှင့်စိတ်ခံစားခြင်းလေ့ကျင့်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုငါကူညီချင်ပါတယ်။
ပိုပြီးသိ? သင်သည်အချစ်နှင့်အတူ ... Edwin
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနည်းပြ 85 € / 90 မိနစ်။
မင်းအလုပ်မှာတစ်ခုခု ၀ င်ရောက်နေသလား၊ မင်းရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြောဖို့အခက်အခဲရှိသလား၊ ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး (သို့) ၀ ိညာဉ်ရေးရာတိုးတက်မှုကိုအထောက်အပံ့လိုချင်သလား။ သင့်ကိုကျွန်ုပ်ထင်ဟပ်ပြသခြင်း၊ လိုအပ်သောသင်၏သက်သောင့်သက်သာရှိသောဇုန်မှထွက်ခွာခြင်းနှင့်သင့်ကိုအပြုသဘောဆောင်။ အပြုသဘောဆောင်သည့်အမြင်ဖြင့်ရှုမြင်ရန်ကူညီပေးသည်။
အလတ်စားတိုင်ပင်ဆွေးနွေး 50 € / 45 မိနစ်။
SNU မှအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရသည့်ကြားခံတစ်ခုအနေဖြင့်အင်္ဂလိပ်စာကို အခြေခံ၍ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်လက်ဝတ်ရတနာများကဲ့သို့အရာဝတ္ထုများကိုသယ်ဆောင်ရန်မလိုပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာကမ္ဘာမှဆက်သွယ်လိုသူနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ပြီးမည်သည့်သံသယကိုမဆိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်နိုင်သမျှအထောက်အထားများကိုပေးသည်။
ဝိညာဉ်ရေးကုသမှု 20 € / 25 မိနစ်။
သင်ကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်ရေးကုသမှု၏ဉာဏ်အလင်းသက်ရောက်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားပါ။ ကုသမှုခံယူရန် ၂၅ မိနစ်ခန့်ကြာပြီးသည့်အခါကုသမှုခံယူရန်ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ရေးရာလောကသို့ညှိရသည်။
နှုန်းအပေါ်အထူးလျှော့စျေးနှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက် ဤနေရာတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်.
27 စက်တင်ဘာလ, 2020
၀ ိညာဉ်ရေးရာနှင့်ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စများသည်တစ်ခါတစ်ရံတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲလွဲနေသည်။ ဤပထမဗီဒီယိုတွင်စတော့သို့မဟုတ် cryptos များရောင်းဝယ်သောအခါသင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းများစွာလေ့လာသင်ယူနိုင်ကြောင်းရှင်းပြသည်။ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ မဟာဗျူဟာနှင့်ဘဝတွင်သင့်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောအရည်အသွေးများစွာအကြောင်းသင်ကြားပေးသည်။
ငွေသည်ရေကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်စွာစီးဆင်းရမည်။ လူသည်ဤစဉ်ဆက်မပြတ်အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်အလယ်အလတ်ဘူတာတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သဘာဝကိုယင်း၏လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ရက်ရောမှုကိုမွေးမြူပါ။
8 ဧပြီလ 2020
ကျွန်ုပ်တို့၏ sensitivity သည်ပိုမိုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းနှင့်အတိုင်းအတာများကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့်အသက်တာကိုခံစားရရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မင်းဘာကိုညှိလိုက်လဲ ကျွန်ုပ်တို့၏သတိသည်မြင့်လေလေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များကိုပုံဖော်နိုင်လေလေဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့်လှပပြီးဖန်တီးမှုဘ ၀ ကိုရရှိရန်သင်၏ sensitivity ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ခင်ဗျားကအရမ်းကိုထိခိုက်လွယ်ပါသလား ထိုအခါသင့် ဦး နှောက်သည်ပိုမိုအာရုံခံနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်ပြီး၎င်းကိုသင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာပြန်လည်တွေးတောနိုင်သည်။ သင်၏အာရုံခံအတွေ့အကြုံသည်ပိုမိုပြင်းထန်၊ ပို၍ ရှုပ်ထွေးပြီး ပို၍ ဖရိုဖရဲဖြစ်သည်။ သင်သည်အသစ်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသကဲ့သို့ပိုမိုမြန်ဆန်သောအရာတစ်ခုကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည်။ သငျသညျသာမန်လူတစ် ဦး ထက်လှုံ့ဆော်မှုများကပိုမိုနှိုးဆွပေးသည်.
3 သြဂုတ်လ 2019
သင့်ရဲ့ sensitivity ကို၏ ဦး တည်ရာကိုရောက်ရှိ
8 ဇန်နဝါရီလ 2020
ဘာဝနာ & အသိအမြင်
လူတစ် ဦး သည်ဝိညာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြောင်းပြောသောအခါဘာဝနာသည် 'ဝိညာဏ်၏ပြည်နယ်' ဤအဓိပ္ပာယ်ဖြင့်သတိတစ်ပြည်နယ်သည်၎င်းကိုရရှိရန်နည်းလမ်းများကိုပေးသောထုံးတမ်းစဉ်လာများကိုကျော်လွန်သည် ဖြစ်တည်မှု၏ပြည်နယ် လာရန် နှစ်များတစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်သည်တိကျသောထုံးတမ်းစဉ်လာများကိုမကြာခဏသင်ကြားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်လူသားတို့အားဂါထာ၏ထူးဆန်းသောစွမ်းအားကိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဂါထာပြုလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဥပမာအားဖြင့်အသုံးပြုပုံ Padmasambhava ထံမှ Vajra Guru ဂါထာ.
8 ဇန်နဝါရီလ 2014
သင်၏ကိုယ်ပိုင် 'ဖြစ်တည်မှု' ကိုဖော်ပြရန်သင်ပိုမိုလွတ်လပ်လေလေဂါထာရွတ်ဆိုစဉ်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လေသံကိုရှာရန်ပိုမိုလွယ်ကူလေဖြစ်သည်။
6 ဇန်နဝါရီလ 2020
€4.99 €0.00 လှည်းပေါင်းထည့်ရန်
€4.99 €2.49 လှည်းပေါင်းထည့်ရန်
မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ဘာပါလဲ မင်းရဲ့ဒphilosophန? သင်၏အလုပ်သည်သင်၏ပျော်ရွှင်မှု၊ အိမ်၊ သင်၏ ၀ ါသနာ၊ သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်မိသားစုအတွက်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုလားသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံများကိုသင်ရှာဖွေနေပါသလား။ ကျနော့်အမြင်မှာမှားယွင်းတဲ့အဖြေမရှိပေမယ့်မှန်ကန်သောအဖြေတစ်ခုသာရှိပါတယ်။ မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်။ မင်းရဲ့အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နေသလား။ သို့မဟုတ်မည်သည့်နေရာတွင်စတင်ရမည်ကိုသင်မသိပါ။ ဒီဆောင်းပါးတွေကမင်းအတွက်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုပေးနိုင်လိမ့်မယ်။
သင်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား? သင်သည်အဘယ်သို့ပျော်ရွှင်စေသည်? ဒါကြောင့်မကြာခဏငါတို့သည်ပုံသဏ္ဍာန်မှပယ်ရှားကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝါပေးပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်မမေးမည်အကြောင်း, သင်သည်အဘယ်သို့ပျော်ရွှင်စေသည်?
3 ဖေဖော်ဝါရီလ 2020
သင်၏မွေးကင်းစနိမိတ်လက္ခဏာသည်သင်မွေးဖွားချိန်၌စွမ်းအင်များ၏လွှမ်းမိုးမှုအကြောင်းဖော်ပြသည်။ သင်၏နိဒါန်းနိမိတ်လက္ခဏာသည်အစပြုသည်! ဤဘလော့ဂ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဤကြယ်များသည်လူတစ် ဦး အနေနှင့်သင့်အပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ကြောင်းရှင်းပြချင်ပါသည်။
7 မေလ 2019
သင်၏ကြောက်ရွံ့မှုကိုကျော်လွှားနိုင်ပြီးကြီးမားသောဘဏ္greatာများကသင့်ကိုစောင့်မျှော်နေကြသည်။ ဒါဟာမကြာခဏဇွဲကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ သင်ခံစားရသည့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်နောက်ဆုံးသွားမည့်နေရာတွင်မရှိပါ။
6 ဒီဇင်ဘာလ 2019
လူများစွာသည်သေခြင်းကိုကြောက်။ ဘဝကိုယ်နှိုက်ကိုမကြာခဏကြောက်ကြသည်။ တစ်နေ့တွင်အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကာမျက်မမြင်ဘဝကိုသူတို့ဖြတ်သန်းသွားစေခဲ့သည် အရာအားလုံးပိုကောင်းလာသည်။ သို့သော်မည်သို့နည်း။ သူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသူတို့၏ဘ ၀ ၏ဒီဇိုင်းနာများဖြစ်ကြောင်းသူတို့မမြင်ပါ။
အလယ်အလတ်အလုပ်ဆိုသည်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းအာရုံခံသိမြင်နားလည်နိုင်သည့်သဘာဝစွမ်းရည်ဖြစ်ပြီးသင်ကွယ်လွန်သူ၏သိစိတ်နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ >
ယုံကြည်ခြင်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုဆီသို့ ဦး တည်စေသောဝိညာဉ်ပုံပြင်များ
22 ဇန်နဝါရီလ 2020	တုံ့ပြန်မှုမရှိပါ
၀ ိညာဉ်ရေးရာကမ္ဘာသည်အသိဉာဏ်ရှိပြီးမည်သည့်အချိန်တွင်မည်ကဲ့သို့ဂရုပြုရမည်ကိုသိသည်။ သင့်ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်မဟုတ်ဘဲဘဝ၏အံ့ဖွယ်အမှု၌သင် ပိုမို၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်ယုံကြည်မှုများကိုယုတ်လျော့စေရန်ဖြစ်သည်။
နိုဝင်ဘာလ 21, 2019	တုံ့ပြန်မှုမရှိပါ
ဘာသာတရားတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဘာသာတရားပါ။ မင်းအကြောင်းမင်းမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါသူကကျွန်တော့်ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်။
အက်ဒဝင်ဗန် der Hoeven CSNU
အက်ဒဝင်ကအင်္ဂလိပ်စကားပါ နတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်အမျိုးသားသမဂ္ဂ (SNU) အတွက်အသိအမှတ်ပြု;
သူသည် CRKBO တွင်ဆရာအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားသူဖြစ်သည်။
©ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုအလွန်ဂရုစိုက်စွာပြုစုထားသော်လည်းအမှားအယွင်းများ၊ အဘယ်သူမျှမအခွင့်အရေးဒီကနေဆင်းသက်လာနိုင်ပါတယ်။
နှင့်ဖွဲ့ ❤ by Added တန်ဖိုး - Edwin ဗန် der Hoeven
V ကို Pay ကို
ဒီ pop-up ဖွင့်ရန်ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိဤ icon ကိုနှိပ်ပါ
ဒါ့အပြင်ဒီတရားအားထုတ်မှုကိုရှာပါ ငါတို့တစ်တွေတည်း (ကျွနုပ်)
လူအတော်များများကအခမဲ့ဖြစ်သည် Crown Chakra ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုတရားအားထုတ်ရန် လပြည့်ချိန်၌တွေးတောဆင်ခြင်ရန်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ လရဲ့အနေအထားဟာ Chakras နဲ့ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာမင်းသိသလား။ ဒါကြောင့် Chakra မှာကွဲပြားသောပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု (၇) ခုရှိသည်။
ဒီ pop-up, နှင့်ဆက်စပ်သောတရားအားထုတ်ပြသထားတယ် လ၏လက်ရှိအနေအထား.
HSP နှင့် sensitivity ကို